HORSADA LA KALA-BAXO: SAWIR IYO SHARAXAAD, WAX SOO SAARKA UKUNTA, QAABABKA TARANTA EE GURIGA - BEERAHA DIGAAGA
Dhamaan kuwa ugu muhiimsan ee digaagaha
Ujeedada ugu weyn ee taranka xoolaha casriga ahi waa taranta cusub iyo horumarinta noocyada jira. Shuruudaha ugu muhiimsan ee digaagga casriga ah ee digaagga waa heerarka wax-soo-saarka ukumaha sare, joogitaanka hilibka dhadhanka ah iyo jilicsan, midab madow oo qurux badan. Digaagga jilicsan Legbar si buuxda ayay u daboolaan dhammaan shuruudahaas.
Breed Legbar waxaa la siiyay 1927-kii. Laba laba-beeraley ah oo reer Ingiriis ah ayaa waxay xiiseynayeen in ay u dhalaan digaag cusub, taas oo noqon lahayd ukun kala duwan. Isku dayga ugu horreeya ee is-dhaafsiga curyaaminta Plymouth iyo Leggorn ma guulaysan. Laakiin cilmi-baarayaashu ma aysan daynin isku-dayga, isla markaana waxay gaadheen natiijadii la soo dhaafay. Markii guibkii ugu horreeyay la helay, waxaa la gudbiyey mid ka mid ah waalidiinta. Natiijo ahaan, lugaha ayaa la jaray oo leh midabka quruxda badan iyo wax soo saarka ukumo fiican.
Sharaxaadda iyo qaababka
Digaagga jilicsan ee lo'da waa mid guud ahaan ah. Waxaa loo hayaa sida hilibka iyo ukunta. Hilibku waa mid aad loo qiimeeyo, maadaama uu leeyahay dhadhan cajiib ah iyo midab aad u jilicsan. Ukumaha dumarka badanaa waxay qaadaan wax badan oo badanaa. Iyada oo la isku daro labadan sifood ee muhiimka ah ee la mid ah, jilbaha ayaa noqday kuwa ugu caansan beeraleyda digaaga.
Iska hubi naasaha digaaga ee hilibka iyo wax soo saarka ukunta, iyo sidoo kale hilibka iyo ukunta iyo ukumaha digaagga: Australorp, Welsumer, Redbro, Chocic Chick, Master Gray.
On the nape ah ee digaagga ee caan this waxaa la sameeyay tuft baali la dareemi karo. Sababtoo ah tan, caanaha dadka ee loo naqshadeeyey.
Digaagga la jarjaray ayaa si wanaagsan loo dhisay. Waxay leeyihiin qurux badan wareega gagaarka iyo laabta laabta, kaas oo si adag u daboolay baalalka. Qoorta dheer, qoorta iyo dhabarka waxay khiyaameeyaan xarrago gaar ah. Powyada ayaa ah midab huruud ah, waxay ku kala duwan yihiin si ballaaran u fidiyaan faraha iyo cagaha dheeraadka ah. Baalasha ballaaran ayaa si wacan u dheelitirta daboolka, taas oo ku taal qiyaastii 45 ° jidhka. Dhegaha dhegaha ayaa si buuxda loo hirgeliyaa lana wareegayaa.
Digaagga Legbar waxaa lagu kala saaraa midabkooda midabkooda. Waxay kala duwanaan kartaa iftiin yar oo dahab ah. Dhamaan shimbiraha ayaa lagu daboolayaa lebbooyin, taasoo ka dhigaysa mid aan caadi aheyn oo soo jiidasho leh. Nabadu waxay inta badan ka xoog badan yihiin dhedigga waxayna ku faani jireen boomaato dheecaan badan iyo jidhka. Cirridka barafka ayaa ah casaan cad, iyo "cadad" cad oo hareeraha hoostooda ah. Ragga waxay leeyihiin fara badan oo ka weyn dumarka.
Dufanka ciriiriga ah ee sare ee madaxa ayaa ka duwan midkuna waa Ruush digaag la gooyey.
Digaagga la jarjaray ayaa ah mid degan oo saaxiibtinimo u leh qofka. Iyada oo booqasho joogtada ah ee hoyga ay martida u yihiin, hogaamiyaashu waxay joojiyaan inay ka cabsadaan. Waxay aad u jecel yihiin oo firfircooni maalintaa. Dumarka iyo ragga waa isku dheelitiraan, mana kala duwanaansho gaar ah. Tani waxay sababtay, taranka ayaa aad u qadariyay beeraleyda digaaga, sababtoo ah ma aha wax dhibaato ah oo aan ku dhicin qaylo joogto ah.
Bannaanka iyo wax soo saarka ukunta
Legbars waxay bilaabaan inay jiifaan ukunta laga bilaabo 4-6 bilood. Sanadka gudihiisa hal digaag ayaa keena ilaa 270 ukun, taas oo ah mid aad u sarreeya. Laakiin digaagga buuggan waxaa lagu kala saaraa awooddooda inay ku shubaan caruurtooda. Waxay aad u firfircoon yihiin oo ma fariisan karaan. Bacriminta ukunta ee digaagdaha loo gooyey 90%. Ukumaha Legbar waxay leeyihiin midab aan caadi ahayn. Waxay kala duwanaaneysaa lafdhaqaaqa cagaaran.
Ukunka digaagaha Maran-ga waxay aad u egyihiin ukunta Easter, qolooyinkoodu waxay leeyihiin midab madow ah.
Xilliga nidaamka xulashada, digaagga la jarjaray ayaa si toos ah looga lumay dareenka hooyada. Kuma habboona digaagga. Sidaa daraadeed, beeralayda daaqsatada ah ee khibrada leh ayaa ku talinaya isticmaalka xashiishka si loo hubiyo in ay carqaladeeyaan faracyada. Mararka qaarkood waxaad isticmaali kartaa kootada hore loo diyaariyey, taas oo awood u leh in ay aqbalaan oo ay fariistaan ​​caruurta kale ee caruurta.
Waa muhiim! Digaag yar oo digaagduur ah waa in la dhigaa qadar yar oo ah ukumaha lugaha, haddii kale ma dhajin doono.
Legbar ma ahan mid wax ku ool ah. Farqiga ugu weyn ee taranka waa caafimaad wanaagsan. Laakiin iska hubso inaad tixgeliso xaqiiqda ah in digaagga la gooyey aad u nugul qabow. Si loo xaqiijiyo wax soo saarka ukunta ee joogtada ah, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo kuleylka xilliga jiilaalka.
Waxaad u baahan tahay in aad fahamto in digaagga u baahan yahay aviary ballaaran oo leh barxad. Si aad u sameysid xayawaanku sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, waxay u baahan yihiin meel ku filan oo firfircoon oo firfircoon.
Waa muhiim! Ukunta qashinkaas oo miisaankeedu ka yar yahay afartan garaam waa calaamada koowaad ee xaaladaha aan caadiga ahayn.
Xilliga xagaaga, waxaa lagu talinayaa in digaagga dibedda laga dhigo, oo la dhigo xayndaab ku daboolan karo iyo tiro ku filan oo qoyan. Caanaha ayaa jecel inay waqti ku qaataan qoobka. Buuryadu waa inay ku yaalliin guriga hargabka. Waxaa lagama maarmaan ah in aysan jirin wax iftiin ah, haweenkuna waxay leeyihiin buulag gooni ah. Xilliga jiilaalka, waxaa lagu talinayaa in xayawaanka guriga lagu hayo kaliya qolka si fiican loo diiriyo. Xaaladaha ugu raaxada leh, digaaggu waa inuu ahaadaa mid ballaaran, oo leh qalab.
Heerkulka guriga hargabka waa inuu had iyo jeer noqdaa kor ku xusan + 18 ° C.haddii kale digaagga ayaa joojin kara soo saarida ukunta. Hal lugood waa in ay tiriyaan ugu yaraan 70 mayl laba jibaaran. In aviary waa inuu ahaado mid qalalan oo nadiif ah, haddii kale shimbiraha ayaa jiran kara.
Talooyin ku saabsan qalabka guriga ee digaagga: doorashada iyo iibinta digaag digaag; is-wax-soo-saarka iyo isku-dubbarididda coop digaaga, bixinta hawo-qaadashada.
Dayrka lugta lugta waa inuu ahaadaa mid ballaaran. Breed jecel yahay inay ku socdaan hawada cusub maalmo diiran. Xilliga raaxada, xayawaanku waa in lagu nadiifiyaa dhulka, iyadoon la daboolin cawska qallalan. Waxaa lagu talinayaa in la dhigo kuwa quudiya iyo kuwa cabta ee guduudan. Cilmi-baadhayaashu waxay soo jeedinayaan in uu digaag u dejiyo digaagga.
In barxadda waa in ay ahaataa meelo hoy ah oo abuuri doona hooska iyo geedka. Waxaa lagu talinayaa in la dhiso xayndaab aad u sarreeya sidaa daraadeed digaag digaagsan ma duuli doono. Waxaad jiidi kartaa shabakadda, sameynta nooc ka mid ah saqafka oo yareynaya fursadaha guusha guuleysiga.
Maxay tahay inay daryeesho jiilaalka
Jiilaalku waa xilliga ugu adag ee digaagga lafaha ah. Ma aha kuwo iska caabiya qabow iyo dhaxan. Waqtigaan waa in si gaar ah daryeeshaa xayawaanka. Waxaa lagama maarmaan ah in ay ku hayaan gudaha gudaha kaliya, kuwaas oo marka hore la diiriyo. Waxaa lagu talinayaa in lakabka lakabiyo, caleemaha iyo caleemaha dhulka lagu daboolo si loo hubiyo in xayawaannada ugu badan ee xayawaanku ay qabaan.
Xilliga jiilaalka, waxaa muhiim ah in lagu daro fitamiinada iyo macdanta si ay u cunaan cuntooyinka digaagdaha leh si looga fogaado cudurada suurtagalka ah.
Baro wax badan oo ku saabsan tallaabooyinka loogu talagalay ilaalinta digaagga xilliga qaboobaha: daryeelka jiilaalka, dhismaha digaag digaaga xilliga jiilaalka, kuleylka.
Waxa la siinayo digaagga qaangaarka ah
Waxaa jira fikrad ah in cuntada ugu haboon ee loogu talagalay waa "loo yaqaan" buluug, oo loo maleynayo in lagu iibiyo dukaamo khaas ah oo loogu talagalay si gaar ah loogu talagalay caanahan. Si kastaba ha noqotee, waa in lagu sifeeyaa sida sheekada.
Legbar waa la quudin karaa quudinta hilibka iyo digaagga ukunta, sarreenka oo dhoobo, miraha oo dhan.
Waxaa lagu taliyaa subaxdii si loo siiyo boorash qoyan oo lagu daro fitamiinada. Si loola socdo caafimaadka caloosha ee digaagga, waxaa lagama maarmaan ah in ay si joogto ah ugu daraan waxyaabaha caanaha-caanaha ah cuntadooda.
Xargaha xargaha oo gabi ahaanba ma yaqaanno sida ay u noqonayaan hooyooyinka iyo digaagga jirkooda. Sidaa daraadeed, beeraleydu waa inay isticmaalaan kuleylaha si loo hubiyo in ay carqaladeynayaan faracyada.
Wixii soo saarid, ukumo si taxadar leh ayaa loo doortaa. Waa inay ahaadaan qadar dhexdhexaad ah, oo cusub oo aan wax dhaawac ah lahayn. Marka xigta, shaybaarka haboon waxaa lagu meeleeyaa qalabka. Wakhtiga oo dhan ilaa chicks baalal, ukunta waa in loo rogaa si joogto ah, iyo heerkulka iyo qoyaan waa in si joogto ah loo kormeero.
Sidoo kale akhri shuruudaha doorashada xariirka iyo sifooyinka qalabka ugu fiican; faa'iidooyinka isticmaalka kulubka "Layer", "Hagaha Hagalka", "Cinderella", "Blitz".
Daryeelka daryeelka caafimaadka
Chicks Legbar hatch xoog leh, joogto ah. Maalinta labaad ee nolosha, haweenka iyo ragga waa la kala saari karaa. Midka labaad wuxuu leeyahay muraayad mugdi ah oo dhexdhexaad ah oo ku taala dhexe ee iftiinka iftiinka. Digaagga maalmaha ugu horeeya ee nolosha ayaa u baahan diirimaad, quudin habboon iyo yaraynta dhammaan arrimaha waxyeellada leh. Waa in ay taabtaan, cabsanayaan oo ay dhibsadaan sida ugu yaryar ee suurtogalka ah. Haddii kale, walbahaarka ayaa saameyn ku yeelanaya maskaxda qofka weyn ee qaangaarka ah, taas oo horseedi doonta gardaro ama cabsi xad dhaaf ah.
Chicks Quudin waa saldhigga caafimaadkooda sii socda. Si habboon u bilaabaan in ay ku quudiyaan carruurta yaryar oo boorash rooti ah. Sida dhir barar ah, waa in lagu daraa feed. cawska, cunista lafaha, khudradda la kariyey, fiitamiinada iyo macdanta. Marmarka qaarkood waxaad siin kartaa semolina leh ukunta caleenta ah.
Baro sida loo quudiyo digaagga maalmaha ugu horreeya nolosha.
Beddelka caanaha la qorsheeyey ayaa la sameeyaa marka digaagga la gooyo ay bilaabaan da'da waxayna keenaan ukun yar. Habka Legbar waa in la sameeyaa marka shaqsigu gaaro 3-4 sano. Digaagga jir waa in lagu badalaa shimbiraha caafimaadka leh.
Digaagga la gooyey way ka duwan yihiin noocyada kale. caafimaad wanaagsan. Way adag yihiin waxayna u adkeysan karaan cudurka. Laakiin waxaa jira dhibaatooyin badanaa ku dhaca barafka. Waxay ka kooban yihiin u egyihiin si aan habbooneyn, horumarinta maskaxda ee addimada iyo lafaha. Dhibaatadu waxay noqon kartaa mid ku dhasha oo la helo.
Dareemida caan u dhalatay waxay ku dhacdaa qoobaheeda oo aan la saxin karin.
Qaadashadu waa masuuliyadda kaliya ee milkiilaha. Waxaa loo sameeyay sababtoo ah nafaqo aan fiicnayn, awood la'aanta digaagga si loo yareeyo waxyaabaha muhiimka ah, xaaladaha haboon ee xabsiga.
Bannaanka boodboodka ayaa aad u qadariyay beeraleyda digaaga sababtoo ah tirada faa'iidooyinka:
Daryeel aan qabyo ahayn.
Midab qurux badan oo aan caadi ahayn, joogitaanka tuft.
Soosaarka ukunta sare.
Dabeecad sir ah iyo saaxiibtinimo.
Laakiin xataa nooc caan ah oo caalami ah ayaa leh mid u gaar ah yaraanta:
Dareenka sare ee qabowga.
Digaagga joogtada ah ee lafdhabarta lafdhabarta.
Dumarka dareenka hooyada ee dhediga ah.
Video: dib u eegis jilicsan
Digaagga jilicsan ee lo'da ayaa ah door wanaagsan oo loogu talagalay beeralayda digaaga ee bilowga ah iyo beeralayda khibrad leh. Waad ku mahadsantihiin kala duwanaanshahooda, caafimaad wanaagsan iyo daryeel sahlan oo fudud, shimbiraha qabatimay ayaa u qalma riwaayad aan caadi ahayn. Waxay qaadaan ukun badan waxayna leeyihiin hilib qurux badan. Wixii ah taranta guul leh ee jilicsan ku filan in ay raacaan xeerarka aasaasiga ah ee daryeelka iyo dayactirka.